Osisi na-amị amị: njirimara, njirimara na ala | Network Meteorology
N'ime ụdị oke ohia anyị hụrụ flatwood igbo, nke nwere osisi na-adị ndụ mgbe niile na osisi puru iche, nke osisi deciduous guzobere. Ọ bụ nhazi osisi nke osisi ya na-efufu akwụkwọ ha kwa afọ dabere na okpomọkụ na ihu igwe. E nwekwara ụdị oke ọhịa dị iche iche na-adabere na ohere ebe anyị nọ.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, ụdị na ụdị nke oke osisi na-adịghị mma.
2 Osisi oke ohia
2.1 Akwụkwọ ngafe
2.2 Uto yiri mgbaaka
2.3 M na-emekarị
E nwere ụdị ohia mmiri ozuzo dị iche iche dabere na latitude na ihu igwe ka mma. E nwere oke ohia na udu mmiri na okpomoku. A na-akpọkarị ebe okpomọkụ ohia na-adighi ama ma obu oke ohia. Enwere ike iwere ma ọ bụrụ na a na-akwụ ya na ya na ama. Okwu abụọ a na-ezo aka na ọdịda nke epupụta kwa afọ.
Njirimara bu oke osisi na - acho acho bu ọnwụ nke epupụta n'oge oge kachasị oke n'afọ. Na ọnọdụ dị mkpụmkpụ bụ isi njedebe nke epupụta ga-efunahụ bụ nguzo ike. Nke a ma ọ bụ itịbe na oge nke na-aga site n'oge mgbụsị akwụkwọ ruo oge oyi. N'aka nke ozo, udiri oke ohia nke ohia nwere oke njedebe ya bu kwa nguzo mmiri. Ọ bụ ebe a ebe ọdịda bụ oke nke mmepe nke epupụta n'ihi na a kara akara nnọọ akọrọ oge.
Ala nke osisi ohia Ha na-abụkarị ndị miri emi ma na-amị mkpụrụ dị ukwuu n'ihi onyinye oge nke ihe a na-enye na-akpata. Ihe mejuputara ahihia bu ahihia nile nke na-ada site na osisi ahu ma nke ire ere. Ngwurugwu a na-enyere aka ịnọgide na-enwe ezigbo mmiri na ọkwa edozi na ala.
Oke ohia ahu nwere oke ohia di na North America na ndida Argentina, Chile, Europe, Asia, na owuwa anyanwu Australia. N'aka nke ọzọ, oke ọhịa acid bụ ndị a na-ekesa na mpaghara ebe okpomọkụ America, Africa na Indomalasia. Thedị osisi nke oke ọhịa nwere ụdị enyemaka dị iche iche anyị nọ na ya site na mbara ọwụwa ruo ndagwurugwu na ugwu.
N'ime ahihia ahihia nke ugwu, udiri dika Quercus, Fagus, Betula, Castanea na Carpinus. Ọ bụrụ na anyị gaa ebe okpomọkụ, ụdị Quercus na ụdị Nothofagus na-ejupụta na legume, bignonia na malvaceae. Anụmanụ ndị e ji mara ahịhịa na-acha ahịhịa dị mma gụnyere anụ ọhịa wolf, mgbada, inyeaka, bea, na bison ndị Europe. Ezie na ebe okpomọkụ enwere umu feline, enwe na agwo.
Na mmechi, ekwesiri ikwu na oke ohia nwere oke oyuhia nwere oke ala nke ala na oke osimiri nwere oge 4 akara akara. Na deciduous conifers ihu igwe dị oyi kọntinent. N'aka nke ozo, oke ohia nwere udu oku nke nwere okpomoku nke nwere oge abuo akara aka nke uku, oge udu mmiri na udu mmiri.
Osisi oke ohia
Anyị ga-enyocha ihe bụ ihe mejupụtara ọhịa na-amị mkpụrụ. Ihe mbụ bụ na foliar ngafe. Ọ dịghị osisi perennial nke nwere usoro ndụ nke ọtụtụ afọ nwere akwụkwọ nke ga-adịru oge ndụ gị niile. Akwụkwọ ya ma na-agbanwe mgbe niile n'agbanyeghị n'ụfọdụ ụdị akwụkwọ niile furu efu n'otu oge ahụ. Ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ji nwayọọ nwayọọ na-efunahụ ha mgbe ha na-agbanwe ya.
Usoro nke akwukwo ọdịda na-ejedebe na ụfọdụ njedebe gburugburu ebe obibi dị ka ụkọ mmiri ma ọ bụ nguzo ike dị ala. Ọnọdụ ndị a dị njọ nke gburugburu ebe obibi nwere ike ịmanye osisi ahụ iji belata metabolism ya na ọkwa dị ala. Otu n'ime usoro nke ejiri ihe ịga nke ọma iji lanarị na obere metabolism bụ ịwụsị epupụta kpamkpam ma ọ bụ obere.
Ekwesịrị ikwu na epupụta bụ ebe a na-ahụ maka osisi nke osisi nke photosynthesis, transpiration na ọtụtụ iku ume nke osisi ahụ na-ewere ọnọdụ. Ekele maka stomata, enwere ike ịwepụta oke mmiri n'ụdị vapo mmiri. Otu n’ime nsogbu dị ukwuu nke ihe ọkụkụ n’oge ọkọchị bụ oké ọsụsọ n'ihi ọnwụ nke mmiri na okpomọkụ dị elu. Mmiri na-asọda stomata n'oge usoro fotoynthesis.
Ya mere, site na ịhapụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ahụ, arụ ọrụ dịgasị iche nke metabolism na-akagbu ma belata nlanarị ha. Akwụ akwụkwọ na-eme n'oge ọdịda oge n'ọhịa na-egbu osisi na oge ero na oke ọhịa osisi ohia.
Uto yiri mgbaaka
Ihe yiri mgbaaka bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa. N'ime oge enwere nsogbu gburugburu ebe obibi enwere usoro anụ ahụ ọhụrụ nke na-akwụsị kpamkpam iji belata metabolism. Dị ka ihe atụ, e guzobere conduction anụ ahụ dị ka xylem na phloem na akpati osisi na mpaghara di ala n'oge oge oyi. Ọ bụ ebe a ka anyị nwere ike ịhụ na n'oge opupu ihe ubi, ọrụ nke anụ ahụ na-amalite ọzọ wee mepụta sel ndị na - eduzi ihe. Ọrụ a na - emepụta mgbanaka uto nke a pụrụ ịhụ mgbe ị na - eme akụkụ obe na akpati ahụ.
Ka nke a na-eme kwa oge na mpaghara dị jụụ, mgbanaka uto ọ bụla kwekọrọ na oge nkwụsị na mmemme kwa afọ. N'ụzọ nke a, afọ nke osisi na mpaghara nwere ọnọdụ nwere ike kpebisie ike site na ịgụta mgbaaka uto. N'aka nke ozo, na oke ohia ohia nke ahihia, i nwekwara ike ihu mgbanaka ndia ma adabaghị na mgbanwe kwa afọ. Mgbanwe ndị a anaghị adị mfe ịkọpụta ebe ọ bụ na ha dabere n’oge ọkọchị ma ọ bụ nnukwu mmiri ozuzo.
N'ikpeazụ, ala nke oke osisi na-achoghi ala na-eme nri ma dikwa omimi. Nke a bụ n'ihi oge ebumnuche nke oge na-ere ma na-emepụta ihe na-eme nri. Ala ndị a zuru oke maka ịmaliteghachi na okike nke ala ọhụrụ.
Ala nke osisi deciduous coniferous di iche iche di iche iche di iche iche. Ala ndị a dara ogbenye na-edozi ahụ site na permafrost guzobere na mpaghara ụfọdụ adịghị mma. A na-etolite ala ndị a n'ihi okpomọkụ dị ala na-adị n'ime afọ na obere iru mmiri dị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ọhịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osisi